भान्जा छनोटमा नपरेपछि उपाध्यक्षको रडाको - Khelpati
शनिवार, जेठ २२, २०७८ खेलपाटी संवाददाता
काठमाडौं । एन्फा उपाध्यक्ष कृष्ण थापाले शुक्रबार राति करिब १२ बजे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट एक जिम्मेवारी प्राप्त पत्र पोस्ट गरे । महासचिव ईन्द्रमान तुलाधरको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा यू–१३ खेलाडी छनोटको संयोजकको जिम्मेवारी दिईएको छ । बैशाख ६ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने अन्तिम चरणका छनोटमा समिति बनाएर खेलाडी छनोटको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
शुक्रबारमात्र एन्फाले युथ एकेडेमीका लागि ४२ जना उमेर समुहका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गर्यो । देशभरबाट छनोट भएका १ सय ६६ खेलाडीबाट एन्फाले ४२ खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।
शनिबार बिहानै उपाध्यक्ष थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यू–१३ को अन्तिम छनोट शंकाको घेरामा रहेको भन्दै स्टाटस लेखे । उनले आफु संयोजकलाई थाहा नभएको भन्दै छनोट प्रक्रियामा आपत्ति जनाए ।
उनले लगत्तै मोबाईलबाट स्क्रिन सट गरेर प्रारम्भिक रुपमा आफुले हस्ताक्षर गरेको ७१ खेलाडीको सूची फेसबुकमा हाले ।
एन्फाकै उपाध्यक्षबाट छनोट प्रक्रियामा आपत्ती जनाएपछि खेलाडी छनोट विवादमा पर्यो । तीन वटा विभागीय टिममा युथ एकेडेमी बनाउने एन्फाको महत्वकाक्षी परियोजनाको खेलाडी छनोट प्रक्रियामै उपाध्यक्षले आपत्ती जनाएका थिए । थापाको आपत्ती अन्तिम छनोटमा आफुलाई कुनै जानकारी नगराईएको र नियम विपरित छनोट गरिएको भन्नेछ ।
एन्फाले यस पटक छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन भन्दै प्राविधिक विभागका प्रमुख र विभागीय टिमका प्रमुखलाई छनोट प्रक्रियामा राखेको थियो । जसमा तीन विभागीय टिमबाट आएका प्रतिनिधि सहितको ग्रेडिङका आधारमा खेलाडीको वरीयता निर्धारण गरिएको थियो । छनोट प्रक्रियामा थापा स्वयम आफु समेत सहभागी बनेका थिए । तर अन्तिममा सूची सार्वजनिक भएपछि थापाले आपत्ती जनाए ।
थापाले खेलपाटीसंग भने, ‘एन्फाको सबै काम विधान अनुसार हुनुपर्छ । अन्तिम चरणको छनोटमा जानकारी बिनै नाम सार्वजनीक भएको छ । यो खारेज गर्न माग गर्छु ।’
विवादको खास जरो ?
एन्फाले जिल्ला, प्रदेश हुँदै करिब सय बढी खेलाडी प्रारम्भिक रुपमा युथ एकेडेमीका लागि छनोट गरेको थियो । अन्तिम चरणको छनोट बैशाख ६ देखि ९ गतेसम्म राखिएको थियो । चार दिनसम्म एन्फाका प्राविधिक विभागका प्रमुख सहित विभागीय टिमका प्रतिनिधिले खेलाडी संख्या ७२ मा झार्यो । सो टिममा प्राविधिक समितिका संयोजकको हिसाबले कृष्ण थापाले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । लगत्तै खेलाडीलाई मेडिकल परिक्षणमा राखियो ।
एन्फाको मेडिकल टिमले ७२ मध्य १८ खेलाडीलाई अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दियो । बाँकी रहेका ५१ जनामा टेक्निल टिमको ग्रेडिङका आधारमा खेलाडीको वरीयता निर्धारण गरियो । लिस्टमा रहेका सुरुवाती २१ जना खेलाडी निशुल्क र त्यसपछिका २१ जना खेलाडी शुल्क तिरेर एन्फाको युथ एकेडेमीमा रहने भए । बाँकी खेलाडीलाई वैकल्पिक खेलाडीमा राखियो । एन्फाले निशुल्क कोटाका २१ खेलाडी र पैसा तिरेर खेल्ने कोटाका २१ खेलाडीलाई चिठ्ठा हालेर तीन विभागीय टिममा आईतबार जिम्मा लगाउँदैछ । कुनैपनि खेलाडी नआएको खण्डमा वैकल्पिक खेलाडीले अवसर पाउनेछन् ।
प्राराम्भिक छनोटमा परेका थिए, उपाध्यक्ष कृष्ण थापाका भान्जा मनिष केसी । कृष्ण थापाले हस्ताक्षर गरेको प्रारम्भिक ७१ खेलाडीको सूचीमा भान्जाको समेत नाम समावेश थियो । छनोट प्रक्रियामा भाग लिएर मामा–भान्जा पोखरा फर्किए । एन्फाले शुक्रबार खेलाडीको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्न बैठक आह्वान गर्यो । एन्फाका युथ डेभलपमेन्टका हेड नविन महर्जनले बैठकका लागि पोखरा रहेका उपाध्यक्ष थापालाई सूचना दिएका थिए, मेल पठाए, फोन गरेका थिए । बैठकमा उपस्थित हुन जुम लिङ्क सेयर गरेका थिए । तर बत्ति नभएको भन्दै थापा शुक्रबारको बैठकमा अन्तिम सम्म आएनन् । लगत्तै महर्जनले खेलाडीको सूची प्राविधिक समितिका प्रमुख थापालाई मेल गरेका थिए ।
थापाले प्राप्त गरेको सूचीमा भान्जा २१ मा परे । अर्थात युथ एकेडेमीको निशुल्क कोटामा भान्जाको नाम अटेन । अब सशुल्क कोटामा मात्र भान्जाले एकेडेमीमा बस्न पर्ने भयो । थापाले एन्फामा छनोट टिम र पदाधिकारीहरुलाई फोन गरेर भान्जालाई निशुल्क कोटामा राख्न आग्रह गरे । तर तमाम दबाबका बाबजुत उपाध्यक्षको कुनै जोर चलेन । लगत्तै उनले आफ्नो आग्रह अनुसार नहुने भए अन्तिम सूचीमा हस्ताक्षर नगर्ने अड्डी लिए । कुनै सिप नचलेपछि राति करिब १२ बजे उनले महासचिवको हस्ताक्षरको चिठी फेसबुकमा हाले र छनोटमा आपत्ती जनाए ।
विभागीय विद्यालयको विद्यार्थी भर्ना अन्तिम चरणमा पुगेका कारण खेलाडीको सूची चाँडै सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाबमा एन्फा थियो । सोही अनुसार शुक्रबार नाम टुङ्गो लगाउनुपर्ने समयको दबाब एन्फा समक्ष थियो । तर आफ्नो सम्पुर्ण छनोट प्रक्रियामा मौन रहेका छनाेट समितिका संयोजक थापा निशुल्क कोटामा भान्जा नपरेपछि सामाजिक सञ्चालमा रडाको सुरु गरेको देखिन्छ ।
तर उनी आफै खेलाडी छनोटमा धाँधली गरेको आरोप लगाउँछन् । जिम्मेवारी लिएर प्राय पोखरामै बस्ने उपाध्यक्षले आफुलाई बैठकमै नबोलाईएको झुटो दाबी गर्छन् ।
एन्फाले छनोट समितिका संयोजक कृष्ण थापाबाट हस्ताक्षर नगराएर खेलाडी छनोटको सूची सार्वजनिक गर्यो । आफुले हस्ताक्षर नगरेको सूची सार्वजनिक भएको भन्दै थापाले आपत्ती जनाएका छन् । उनले यो विधान सम्मत र प्रक्रिया बाहिर गएको आरोप लगाएका छन् ।
एन्फाले भने उपाध्यक्ष थापा बोलाएको बैठकमा उपस्थित नभएको उल्लेख गरेको छ । विभागीय टिमको युथ एकेडेमीमा खेलाडीको सुचि बुझाउन ढिलाई भएका कारण चाँडो निर्णयमा पुग्नुपरेको निष्कर्श एन्फाका पदाधिकारी सुनाउँछन् । एन्फाले छनोट प्रक्रियामा कुनै पक्षपात नभएको भन्दै आईतबार निष्पक्ष रुपमा तीन विभागको एकेडेमीमा खेलाडी पठाईने बताएको छ ।
के भन्छन् थापा ?
एन्फा भनेको कर्मा (अध्यक्ष)को घर हैन । उसले जे मन लाग्यो, त्यो गर्न । एन्फाको आफ्नै नियम र विधान छ । एन्फामा जे जति काम कारबाही हुन्छ, त्यो विधान अनुसार हुनु पर्छ ।
मलाई यू–१३ छनोट समितिको संयोजक बनाए । पहिलो चरणको छनोटमा म थिए । अन्तिम चरणको छनोट मलाई जानकारी विनै सार्वजनिक गरिएको छ । म यो खोरेज गर्न भन्छु ।
छनोटको पनि आफ्नै ढाचा छ । प्रशिक्षकहरुले पनि कुन सेसनमा, कुन दिन, कुन खेलाडीलाई कति मिनेट खेलाए भन्ने रिपोर्ट खै कहाँ छ ?
त्यो प्रत्येक दिनको रिपोर्ट संयोजकले हेर्नु पर्दैन । छनोटमा सहभागी भएका प्रशिक्षकले दिएको रिपोर्ट कहाँ छ ? एन्फाले सार्वजनिक गरेको लिस्टमा छनोट समिति संयोजकको हस्ताक्षर हुनु पर्दैन । मरो नाम र हस्ताक्षर विनाकै लिस्ट तयार हुन्छ । कसरी ? टेक्निकल कमिटिको हस्ताक्षर कहाँ छ ?
आफ्नो मन परेकाको नामको लिस्ट तयार पार्दै फेसबुकमा पोस्ट गर्दैमा हुन्छ । त्यसमा आधिकारिकता के छ ? फेरी यस्तो महामारीमा यो लिस्ट निकाल्न किन हतार ? यसैमा शंका छ । यो सार्वजनिक गरेको लिस्ट पूर्ण शंकाको घेरामा छ ।
यो कुरा तीन विभागियहरुले पनि स्वीकार्नु हुँदैन । र यो मान्य पनि हुने छैन । म पोखर गएको मौका छोपेर एन्फामा मनमानी गर्ने ?
आफ्नो रोजाइकालाई समेटेर लिस्ट लयार पार्ने । मेरो ११ महिना बाँकी छ । एन्फामा म हुन्जेल यस्तो वेतिथी हुन दिन्न । यो मेरो जिम्मेबारी पनि हो । म नहुँदा जे गरुन् ।
मलाई कसैले खेलाडी छनोटको मिटिङ भनेर बोलाएका छैनन् । मलाई एन्फाका कर्मचारी नविनले भर्चुअल मिटिङ छ आउनु होला भनेर भनेको थिए । मैले सोध्दा तीनै खेलाडीको एमआरआई रिपोर्ट आएको छ । त्यसैको विषयमा छलफल हुने भन्ने कुरा भएको थियो ।
मैले भर्चुअल मिटिङमा आउने प्रयास पनि गरेको थिए । तर, मैले प्रयास गर्दा गर्दै पनि नेटको समस्या भएकाले सहभागी हुन सकिन ।